गोपनीयता नीति - मोलोओको
यो गोपनीयता नीति वर्णन गर्दछ कसरी तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी संकलन, प्रयोग, र साझा जब तपाइँ भ्रमण वा एक खरीद बनाउन मोलोओको ("साइट")।
- "कुकीज" डाटा फाइलहरू हुन् जुन तपाइँको यन्त्र वा कम्प्युटरमा राखिन्छ र प्राय: अज्ञात अद्वितीय पहिचानकर्ता समावेश गर्दछ। कुकीहरूको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, र कसरी कुकीज अक्षम गर्ने, भ्रमण गर्नुहोस् सबै कुकीजको बारेमा.
- "फेसबुक पिक्सेल" र "गुगल ऐडवर्ड्स पिक्सेल" क्रमशः फेसबुक र गुगलको स्वामित्वमा रहेको इलेक्ट्रोनिक फाईलहरू हुन्, र हामी तपाईंलाई अधिक व्यक्तिगत सेवा प्रदान गर्न अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्दछौं र हामी निरन्तर हाम्रा उत्पादनहरू सुधार गर्न सक्दछौं।
थप रूपमा, जब तपाईं एक खरीद गर्नुहुन्छ वा साइट मार्फत खरीद गर्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ, हामी तपाईंबाट केहि जानकारी स collect्कलन गर्दछौं, तपाईंको नाम, बिलि address ठेगाना, शिपिंग ठेगाना, भुक्तान जानकारी (क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू, PayPal सहित), ईमेल ठेगाना, र फोन सहित संख्या हामी यस जानकारीलाई "अर्डर जानकारी" को रूपमा सन्दर्भ गर्दछौं।
हामी Google Inc. द्वारा प्रदान गरिएका विभिन्न उत्पादनहरू र सुविधाहरू प्रयोग गर्दछौं (१ 1600०० एम्फीथिएटर पार्कवे, माउन्टेन भिउ, सीए 94043 XNUMX०XNUMX,, संयुक्त राज्य अमेरिका; “गुगल”)।
पारदर्शिताको कारणका लागि कृपया यो नोट गर्नुहोस् कि हामी गुगल ट्याग प्रबन्धक प्रयोग गर्दछौं। गुगल ट्याग प्रबन्धक व्यक्तिगत डेटा स not्कलन गर्दैन। यसले हाम्रो ट्यागहरूको एकीकरण र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। ट्यागहरू साना कोड तत्त्वहरू हुन् जुन ट्राफिक र आगन्तुकहरूको व्यवहार मापन गर्न, अनलाइन विज्ञापनको प्रभाव पत्ता लगाउन वा हाम्रो वेबसाइटहरूको जाँच र अनुकूलन गर्नका लागि प्रयोग गर्दछन्।
गुगल ट्याग प्रबन्धक भ्रमणको बारेमा अधिक जानकारीको लागि: नीति प्रयोग गर्नुहोस्
यस वेबसाइटले गुगल एनालिटिक्सको एनालिटिक्स सेवा प्रयोग गर्दछ। गुगल एनालिटिक्सले "कुकीहरू" प्रयोग गर्दछ, जुन तपाइँको कम्प्युटरमा राखिएका टेक्स्ट फाईलहरू हुन्, वेबसाइटलाई प्रयोगकर्ताहरूले कसरी साइट प्रयोग गर्दछन् भन्ने विश्लेषण गर्न मद्दत गर्न। तपाईंको वेबसाइटको प्रयोगको बारेमा कुकीले उत्पन्न गरेको जानकारी (तपाईंको आईपी ठेगाना सहित) संयुक्त राज्यमा सर्वरमा गुगलद्वारा प्रसारण गरिन्छ।
हामी गुगलको एनालिटिक्स "gat._anonymizeIp ()" कोड द्वारा पूरित भएको तथ्यलाई हामी ध्यान दिन्छौं। यस वेबसाइटमा आईपी ठेगाना (तथाकथित आईपी-मास्किंग) को अज्ञात संग्रहको ग्यारेन्टी गर्न।
आईपी ​​अज्ञातकरण सक्रियताको मामलामा, गुगलले यूरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूका साथै अन्य पक्षहरूको लागि युरोपियन आर्थिक क्षेत्रमा सम्झौताको लागि आईपी ठेगानाको अन्तिम अक्टट काट्छ / बेनामी गर्दछ। केवल अपवादात्मक मामिलाहरूमा, पूरा IP ठेगाना अमेरिकामा गुगल सर्भर द्वारा पठाइन्छ र छोटो पारिएको हुन्छ। वेबसाइट प्रदायकको तर्फबाट, गुगलले यो जानकारी तपाईंको वेबसाइटको प्रयोगको मूल्याating्कनको लागि, वेबसाइट अपरेटरहरूको लागि वेबसाइट गतिविधिमा रिपोर्ट कम्पाइल गर्ने र वेबसाइट प्रदायकलाई वेबसाइट गतिविधि र इन्टरनेट प्रयोग सम्बन्धी अन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दछ। गुगलले तपाईंको आईपी ठेगाना गुगलले कुनै पनि अन्य डाटाद्वारा गुगलसँग समेट्दैन। तपाइँ तपाइँको ब्राउजर मा उपयुक्त सेटिंग्स को छनौट गरेर कुकीज को उपयोग गर्न अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि तपाईंले यो गर्नुभयो भने, तपाईं यो वेबसाइटको पूर्ण प्रकार्य उपयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्न।
यसका साथै तपाईले गुगलको संग्रह र डाटा (कुकीहरू र आईपी ठेगाना) को प्रयोग रोक्न सक्नुहुन्छ ब्राउजर प्लग-इन डाउनलोड गरेर स्थापना गरेर। थप विवरण.
तपाईं तलका लिंकमा क्लिक गरेर गुगल एनालिटिक्सको प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ। एक अप्ट-आउट कुकी कम्प्युटरमा सेट हुनेछ, जुन तपाइँको डेटाको भविष्यको संग्रहलाई यस वेबसाइटमा भ्रमण गर्दा रोक्दछ:
Google Analytics असक्षम पार्नुहोस्
सर्त र प्रयोगको सर्त र डेटा गोपनीयता को बारे मा अधिक जानकारी पाउन सकिन्छ सर्तहरू वा मा pओलिस्ट. कृपया नोट गर्नुहोस् कि यस वेबसाइटमा गुगल एनालिटिक्स कोड आईपी ठेगानाहरूको एक अज्ञात संग्रह (तथाकथित आईपी-मास्किंग) सुनिश्चित गर्नका लागि "एननामीइज आईपी" द्वारा पूरक हुन्छ।
गुगल गतिशील पुन: बजार
हामी विशेष गरी Google डिस्प्ले नेटवर्कमा ट्राइवागोलाई विज्ञापन गर्न गुगल डायनामिक रिमार्केटिंग प्रयोग गर्दछौं। डायनामिक रिमार्केटिंगले तपाइँको विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्दछ हाम्रो वेब साइटको कुन भागहरूमा तपाइँले आफ्नो वेब ब्राउजरमा कुकी राखेर हेर्नुभएको छ। यो कुकीले कुनै पनि हिसाबले तपाईंलाई पहिचान गर्दैन वा तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणमा पहुँच दिदैन। कुकीलाई अन्य वेबसाइटहरूमा संकेत गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन "यो प्रयोगकर्ताले विशेष पृष्ठ भ्रमण गरेको थियो, त्यसैले तिनीहरूलाई पृष्ठसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरू देखाउनुहोस्।" गुगल गतिशील रीमार्केटिंगले हामीलाई तपाईंको मार्केटिंग टेलर गर्न अनुमति दिन्छ तपाईंको आवश्यकताको लागि उपयुक्त छ र केवल विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्दछ जुन तपाईंसँग प्रासंगिक छन्।
यदि तपाईं ट्रिभागोबाट विज्ञापनहरू हेर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं भ्रमण गरेर Google को कुकीजको प्रयोग अप्ट-आउट गर्न सक्नुहुन्छ गुगलका विज्ञापन सेटिंग्स। थप जानकारीको लागि गुगलको भ्रमण गर्नुहोस् गोपनीयता नीति.
गुगल द्वारा डबलक्लिक
डबलक्लिकले रुचि-आधारित विज्ञापनहरू सक्षम गर्नको लागि कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। कुकिजले पहिचान गर्दछ कि कुन विज्ञापन ब्राउजरमा देखाईएको छ र तपाइँ विज्ञापन मार्फत वेबसाइट पहुँच गरेको छ कि छैन। कुकिजले व्यक्तिगत जानकारी स collect्कलन गर्दैन। यदि तपाईं रूचिमा आधारित विज्ञापनहरू हेर्न चाहानुहुन्न भने, तपाईं भ्रमण गरेर Google को कुकीजको प्रयोग अप्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ गुगलका विज्ञापन सेटिंग्स। थप जानकारीको लागि गुगलको भ्रमण गर्नुहोस् गोपनीयता नीति.
हामी रिटरेजिंग ट्यागहरू र कम्पनी फेसबुक इंक द्वारा प्रदान गरिएको कस्टम ऑडियंस पनि प्रयोग गर्छौं (१1601०१ एस क्यालिफोर्निया एवेन्यू, पालो अल्टो, सीए 94304 XNUMX०XNUMX युएसए, "फेसबुक")।
फेसबुक कस्टम दर्शकहरु
रुचि-आधारित अनलाइन विज्ञापनको सन्दर्भमा, हामी उत्पादन फेसबुक कस्टम दर्शकहरूको प्रयोग गर्छौं। यस उद्देश्यका लागि, एक गैर-उल्टाउन योग्य र गैर-व्यक्तिगत चेकसम (ह्यास मूल्य) तपाईंको प्रयोग डाटाबाट उत्पन्न गरिएको छ। त्यो ह्यास मान फेसबुकमा विश्लेषण र मार्केटिंग उद्देश्यका लागि प्रसारण गर्न सकिन्छ। स Information्कलन गरिएको जानकारीले ट्रिभगो एनवीको वेबसाइटमा तपाईंको गतिविधिहरू समावेश गर्दछ (उदाहरणका लागि ब्राउजि behavior व्यवहार, भ्रमण गरिएको उपपृष्ठहरू, आदि)। तपाईको आईपी ठेगाना पनि प्रसारित भयो र विज्ञापनको भौगोलिक नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरियो। स data्कलन गरिएको डाटा फेसबुकमा ईन्क्रिप्ट गरिएको मात्र प्रसारित हुन्छ र हामीलाई अज्ञात छ जसको मतलब व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत डाटा हामीलाई दृश्यात्मक छैन।
फेसबुक र कस्टम श्रोताको गोपनीयता नीति बारे अधिक जानकारीको लागि, कृपया जाँच गर्नुहोस् फेसबुक गोपनीयता नीति or अनुकूलन श्रोता। यदि तपाईं अनुकूलन दर्शक मार्फत डाटा अधिग्रहण चाहनुहुन्न भने, तपाईं अनुकूलन श्रोतालाई असक्षम गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ.
फेसबुक एक्सचेन्ज FBX
जब तपाईं पुन: बजार ट्यागको मद्दतले हाम्रो वेबसाइटहरू भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईंको ब्राउजर र फेसबुक सर्भर बीचको एक सीधा सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। फेसबुकले तपाइँको आईपी ठेगानाको साथ हाम्रो वेबसाइटको भ्रमण गरेको जानकारी प्राप्त गर्दछ। यसले फेसबुकलाई तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँको प्रयोगकर्ता खातामा तपाइँको भ्रमण प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। यस प्रकार प्राप्त गरिएको जानकारी हामीले फेसबुक विज्ञापनको प्रदर्शनका लागि प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामी औंल्याउँछौं कि वेबसाइटको प्रदायकको रूपमा हामीसँग प्रसारित डाटाको सामग्री र फेसबुक द्वारा यसको प्रयोगको बारेमा केही ज्ञान छैन।
फेसबुक रूपान्तरण ट्र्याकिंग पिक्सेल
यस उपकरणले हामीलाई प्रयोगकर्ताहरूको कार्यहरू अनुसरण गर्न अनुमति दिँदछ जब उनीहरू फेसबुक विज्ञापनमा क्लिक गरेर प्रदायकको वेबसाइटमा पुनः निर्देशित हुन्छन्। हामी तथ्याical्कगत र बजार अनुसन्धान उद्देश्यहरूको लागि फेसबुक विज्ञापनको प्रभावकारिता रेकर्ड गर्न सक्षम छौं। एकत्रित डाटा अज्ञात रहन्छ। यसको मतलव हामी कुनै पनि व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डेटा देख्न सक्दैनौं। यद्यपि संकलित डाटा फेसबुक द्वारा सुरक्षित र प्रोसेस गरिएको छ। हामी यस समयमा हाम्रो जानकारी अनुसार यस विषयमा तपाईंलाई सूचित गर्दैछौं। फेसबुक तपाईंको फेसबुक खातासँग डाटा जडान गर्न र आफ्नो विज्ञापन उद्देश्यको लागि डाटा प्रयोग गर्न सक्षम छ, फेसबुकको गोपनीयता नीति अन्तर्गत फेला पर्‍यो: फेसबुक गोपनीयता नीति। फेसबुक रूपान्तरण ट्र्याकिंगले फेसबुक र यसको पार्टनरहरूलाई तपाईलाई फेसबुकमा र बाहिर विज्ञापन देखाउनको लागि अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, कुकी यी उद्देश्यहरूको लागि तपाईंको कम्प्युटरमा बचत हुनेछ।
वेबसाइट प्रयोग गरेर तपाईं फेसबुक पिक्सेलको एकीकरणको साथ डाटा प्रोसेसिंगमा सहमत हुनुहुन्छ।
कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाईं आफ्नो अनुमति रद्द गर्न चाहनुहुन्छ भने: विज्ञापन सेटिंग्स.
सम्भावित जोखिम वा धोखाधड़ीका लागि हाम्रो अर्डरहरू स्क्रिन गर्नुहोस्; र
तपाईंलाई एक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान गर्दै
विश्लेषणात्मक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्नुहोस्, बिभिन्न प्लेटफर्महरूमा विज्ञापन र retargeting समावेश जस्तै फेसबुक र गुगलमा सीमित छैन।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी तेस्रो पक्षहरूसँग साझेदारी गर्दछौं तपाईंको व्यक्तिगत जानकारीलाई प्रयोग गर्न मद्दत गर्न हामीलाई माथि वर्णन गरे अनुसार। हामी गुगल एनालिटिक्स को उपयोग गर्न को लागी हाम्रो ग्राहकहरु कसरी साइट को उपयोग को उपयोग गर्न को लागी मद्दत पुर्‍याउँछ - गुगलले तपाईको व्यक्तिगत जानकारी यहाँ कसरी प्रयोग गर्दछ भन्ने बारे पढ्न सक्नुहुन्छ: गोपनीयता. तपाईं यहाँ Google Analytics को अप्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout।
अन्तमा, हामी तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी लागू कानून र नियमहरूको पालना गर्न, सबपोना, खोज वारन्ट वा हामीले प्राप्त गरेको जानकारीको लागि अन्य कानुनी अनुरोधलाई जवाफ दिन, वा अन्यथा हाम्रो अधिकारहरूको सुरक्षा गर्न साझा गर्न सक्छौं।
माथि वर्णन गरिए अनुसार, हामी तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी लक्षित विज्ञापन वा मार्केटिंग संचार प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गर्छौं हामी विश्वास गर्छौं कि तपाइँलाई चासो लाग्न सक्छ। लक्षित विज्ञापनले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे थप जानकारीको लागि, तपाईं नेटवर्क विज्ञापन इनिसिएटिभ (“NAI”) शैक्षिक पृष्ठमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ undersटन्डिंग अनलाइन विज्ञापन.
थप रूपमा, तपाईं यी मध्ये केही सेवाहरू अप्ट-आउट गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल विज्ञापन एलायन्सको अप्ट-आउट पोर्टलमा भ्रमण गरेर डिजिटल विज्ञापन गठबन्धनको.
पाठ मार्केटिंग र अधिसूचनाहरू (यदि लागू छ भने)
चेकआउटमा तपाईंको फोन नम्बर प्रविष्ट गरेर र खरीद सुरू गर्नाले, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि हामी तपाईंलाई पाठ सूचनाहरू (तपाईंको अर्डरको लागि, त्यागिएको कार्ट अनुस्मारकहरू सहित) र पाठ मार्केटि offers प्रस्तावहरू पठाउन सक्दछौं। पाठ मार्केटिंग सन्देशहरू प्रति महिना १ exceed भन्दा बढी हुँदैन। जवाफ दिएर तपाईं थप टेक्स्ट सन्देशहरूको सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुनेछ बंद करो। सन्देश र डाटा दरहरू लागू हुन सक्छ।
हाम्रो गोपनीयता अभ्यासहरूको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, यदि तपाईंसँग प्रश्नहरू छन्, वा यदि तपाईं गुनासो गर्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया ईमेलमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। [ईमेल सुरक्षित]